Home Wararka Itoobiya oo ay Saraakiil kaga Dhimatay Duqeyntii Baydhabo
Dalka Itoobiya oo waligeed cadow u ahayd Somaliya ninka yiri wax laba sno ka yar ayey saaxibbo iyo walaalo dhiigga isu shuba noogu noqdeen oo waa ku biireynaa waa beenlow cadeystay. Xasuuqii ay Baydhabo ka geystay maalimihii tagay sida caadada ah lama hayo tiroob ka dhab ah walaalalaha dhintay maadaama madaafiicda loo riday meel walba iyo ciddii ay khuseyso.
Waxaa ay geesiyaasha reer K/galbeed ka dileen askar badan waxaana ay Dowladda Ethiopia soo waydiisatay UNSOS diyaaradaha qaada dhaawaca iyo meydka waayo waxaa Baydhabo ka yaalla dhaawac badan waxaana ku dhintay saraakiil sarsare oo Itoobiyaan ah.
Wararka aan Baydhabo ka heleyno waxay sheegayaan in sarakaiisha dhimatay ay ku jiraan Hal G/Sare, hal Gashaanle iyo hal dhamme, iydoo ciidan bandanna ay ka dhinteen.
Saraakishaan kuma dhiman hal goob waxaana halkaas ka cad in ciidan badani uu kaga dhintay dagaalka ay ku qaadeen shacbiga reer K/Galbeed oo iyaga aan haysan madaafiicda goobta iyo Tangiyada aan xabbddu Karin ee casriga ah, kuwaas oo xataa daadka la kormarsiinayey.
Runtii waa wax laga xumaado in dowladaadii ay cadow kuu keensato oo ay magaalada ka goyso isgaarsiinta si aan loo ogaan waa dhacay, iyadoo dhallinyaro badan sidii ganacsigii dadka ari camal la isugu xiriiriyey loo taxaabay xabsiyada magaalada.
Dhinaca kale waxaa magaalada jooga damiir laawayaal dawladdaas u adeega oo dadka u caburiya, iyadoo kuwa kalana ay doorasho ka fekerayaan. Magaalada waxaa ka dhici doona laba arrimood, in Maqaarsaar Madaxweyne ku sheeg ah uu ku soo baxo kaas oo ah ninka ay wadato dawladda iyo kan kalana laga dhigi doono guddoomiyaha barlaamanaka halkaasna K/Galbed oo danaheeda ka shaqeysataa loogu dhameyn doono.
Gabadood falka dawlaaddaan Farmajo hadda ma bilaaban ee Waxaa kursiga laga tuuray Jawaarioo aan wax khalad ah gelin, Waxaa handadaad iyo sagootin la isugu taray Shariif Xasan, waxaa gurgiisa cadaadis iyo xoog looga raray Gudoomiye Mursalwaxaana jeelka la dhigay hogaamiye kale oo reer K/Galbeed ay shinsanayeen,Sheekh Mukhtaar Roobow Cali oo ay reer K/Galbeed is lahaayeen armuu culeyska shabaab idinka dulqadaa, maadaamaa uu khidadoodu yaqaanno.
Hasa yeeshee in Shabaab lala dagaallo oo dalka laga xoreeyo waxay ka hor imaneysaa danaha kooxo badan oo raba inay ku sii joogaan waxaa la daagaaleynaa shabaab iyo dawladda oo rabta inay na tiraahdo hadda ayaan u soo jeesan donnaa ee waqti noogu dara laba sano kadib.
Hadaba Amxaaradu ha ogaato in dadku ay leeyihiin damiir oo ay nafatooda ku hor istaagi karaan Taangi sida ka muuqata sawirka waayeelkaan waddaniga ah ee ay cabsidu ka dhammaatay gaaraty oo soo garay beydaadkaan :
Dhedigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meele.
Dhadhan malaha aadmigu wuxu kugu dhalliilaaye.
Nin dharbaaxo quudheed dugsaday dhaqayaded maalye Dhashaaday sugtaa xaajadaad dhawrataa abide.
Previous articleXukun lagu riday wasiir ka tirsan Xukuumada Soomaaliya oo musuq-maasuq u xirnaa
Next articleHalista Wasiir OOMAAR iyo Ammaanka Shaqaalaha Hawada
Dowladda Farmaajo & Al Shabab oo canshuur ka wada qaada Dekedda...